प्रकाश दाहालले लेखेका थिए, ‘म माओवादीको निरन्तर लडिरहने एउटा योद्धा हुँ’ « Naya Page
प्रकाश दाहालले लेखेका थिए, ‘म माओवादीको निरन्तर लडिरहने एउटा योद्धा हुँ’
मेरो नाम प्रकाश दाहाल हो । नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन आयोजक समितिको सदस्य । नयाँ परिचय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयको सदस्य हुँ । यसबाहेकका अन्य परिचय गौण हुन् । मेरा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारहरु यी परिचयका अगाडी गौण हुन् ।
म माओवादीको निरन्तर लडिरहने एउटा योद्धा हुँ । यी प्राथमिक परिचयबाहेक जोडिएका अन्य परिचय मेरा लागि गौण हुन् । तर पुरै समाजले त्यसलाई प्रधान परिचय र मेरा संघर्षका मैदानहरुमा दिएको योगदानलाई माध्यमिक परिचयका रूपमा अपव्याख्या गरिरहेका छन् । हो, म पुष्पकमल दाहालको छोरा हुँ । तर, म प्रचण्डको एउटा लडाकू र कार्यकर्ता हुँ । म पुष्पकमल दाहाललाई बुवाका रूपमा अगाडी उभ्याउँछु, प्रचण्डका अघि नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटा सदस्यका रूपमा उभिएको हुन्छु ।
समय चक्रका कारण म अध्यक्षको वरिपरि नै धेरै नै खटिएको थिएँ । जतिबेला अध्यक्ष प्रचण्डलाई राज्य र अन्तर्रा्िष्ट्रय जगतले पनि रेडकर्नर नोटिस जारी राखेको थियो । त्यस बेला उहाँको सुरक्षा अङ्गका रूपमा मैले लामो समय काम गरेको छु । उकाली ओराली, भन्ज्याङ चौतारी र विभिन्न युद्धमा मेरो उहाँसँग निरन्तर सहयात्रा छ ।
हाम्रा लागि संविधानसभा, परिवर्तन हरेक जाती, वर्ग र समुदायको राजनीतिक उत्थान प्रधान हुँदाको लडाइ प्रधान हो । हामी युद्धकालमा पनि यही लडाइमा निरन्तर लागिरहेको थियौँ, जसका केही उपलब्धि भए त्यसको संस्थागत काम गर्नका लागि अहिले पनि लागिरहेका छौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एउटा साधारण योद्धाका रूपमा म यी सबै कुरा गरिरहेको छु ।
मलाई लाग्ने गरेको आक्षेपका पछाडि म दौडन चहान्न । तर, यी आक्षेपहरु कुन नियतका आधारमा लागिरहेका छन् भन्ने कुरामा मेरो दृष्टि छैन भन्नेचाहीँ होइन । त्यसकाविरुद्धमा मेरा प्रतित्रियाहरु मात्रै नआएका हुन् । शान्ति प्रक्रिया हुँदै नेपाली सरल राजनीति, मूल राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा आएपछि प्रचण्डलाई प्रहार गर्ने योजनाका आधारमा अनेक कोणबाट मेरो नाममा नकारात्मक टिप्पणी हुन थाल्यो ।
स्मरण होस्, हामी पनि चन्द्रमाबाट झरेका एलियन होइन । साधारण परिवारका मान्छे हौँ जो सधैँ साधारणको अधिकारका लागि निरन्तर लडिरहेको थियो । यसमा मेरो नाम जोडेर प्रचण्डमाथि किन प्रहार ? अथवा प्रचण्डको नाममा ममाथि किन प्रहार ? जीवनको एउटा उर्जाशिल समयमा मलाई आक्षेप लगाउने साथीहरूले राजनीतिक मुनाफा लिएर वा अन्य अवसरको उपभोग जसरी गरिरहेका थिए, म युद्धको मैदानमा थिएँ । हजारौँ सहादत पाएका योद्धाहरुको भिडमा बन्दुक बोकेर राज्य र तानाशाहीविरुद्धको अभियानमा सक्रिय भएको थिएँ ।
यसको नजरअन्दाज गरी प्रकाश दाहालको परिचय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छोराका रूपमा मात्र गरिन थालियो । हो, म प्रचण्डको छोरा अवश्य हुँ । तर, त्यसबाहेक म माओवादीको निरन्तर सहयात्रामा जनयुद्धकालदेखि लागेको योद्धा पनि हुँ । मैले जतिबेला बन्दुक बोकेर जीवनलाई मृत्युको धारमा हिँडाएको थिएँ । त्यस बेला कोही कसैले प्रचण्ड वा प्रकाशको जीवनबारेको चर्चा गहन रूपमा गरेन । तर, यो परिवेशमाथि मेरो केही विरोध वा समर्थन छैन ।
म जानकार छु भन्दैछु– ‘बुवा प्रधानमन्त्री बन्नु उहाँको राजनीतिक जीवनको चक्रले दिएको अवसर भएझैं म त्यो सचिवालयमा उहाँको छोराका हिसाबले होइन, सहयोद्धाका हिसाबले भएको हुँ ।’ मेरो विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी गरी सामाजिक सञ्जाल र चियापसलहरु फोहोर बनाउने साथीहरूलाई एउटै प्रश्न छ, ‘परिवर्तनका लागि हामी मर्न तयार हुँदा, म बन्दुक बोकेर हिँड्दा कहाँ थियौ साथी रु परिवर्तन यत्तिकै भएको होइन, परिवर्तनका लागि मृत्युलाई अँगालेर हिँड्न सक्नुपर्छ ।’
अवसरसँग बाह्रैकाल नजिक हुने तर जब सङ्घर्ष गरेकाहरुले काम गर्ने मौका आउँछ त्यस बेला वाइयात कुरामा अल्झिने साथीहरूले तथ्यलाई केलाएर अघि बढ्नुहुनेछ भन्ने अझै विश्वास लिएको छु । मुलुक निर्माणका लागि जसले जहाँ जसरी टिप्पणी गरिरहेपनि मेरा यात्राहरू निरन्तर अध्यक्षको सहयोगमा अघि बढ्नेछ भन्नेमा शङ्का छैन । यसर्थ, मेरा विरोधमा अक्षरहरुको थुप्रो लगाउनेहरुसँग गुनासो गर्नुको साटो सुझाव दिन्छु– ती फगत शब्दहरूको थुप्रो सृजनात्मक कामका लागि उपयोग गरे कसो होला ?